Ejipta, Firenena Misy Gadra Politika An’Arivony Maro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Jolay 2017 1:58 GMT
Hamafisin'ilay ejiptiana bilaogera, Ala’a Abdulfatah [arabo], fa an'arivony maro ireo gadra politika voatàna any am-ponja ao amin'ny fireneny no mbola tsy nandalo fitsaràna.
« Manana gadra politika an'arivony maro i Ejipta. Tsy misy mahafantatra izay tena isa marina, saingy fantatray tsara ny tsy rainy zakain'izy ireny sy ny fanaovana tsinontsinona iainany. Isan'izy ireny ireo gadra noho ilay Jihad voalohany, dia ireo izay nosamborina tany amin'ny taona 80, ireo Rahalahy Miozolmàna naiditra am-ponja tany amin'ny taona 90, ary hatramin'ireo salafistes, izay vao haingana no voasambotra. Naiditra am-ponja daholo ry zareo ireo ary tsy hoe fotsiny tsy nomena zo hahazo fitsaràna, fa na dia tsy hitan'ny fitsaràna aza izay maha-meloka an-dry zareo ary efa namoahana didy famotsorana, dia mbola mitohy mihiboka am-ponja izy ireny ».
Mba hisarihana ny saina momba ny zavamanjo ireny mpifonja ireny, nitafa tamin'ny fianakavian'ny mpifonja iray i Abdulfattah sy bilaogera iray hafa, Malek [Arabo], ary tamin'ny mpisolovava mpiaro raharaha iray mitovy amin'ny azy io.
“Ity dia lahatsary tsotra fotsiny nataoko sy Malek niaraka tamin'ny ray aman-drenin'i Abdulmonem Jamaluddin. Hita ao anatiny ireo fanehoankevitra avy amin'ny mpisolovava, Ahmed Aif-ul-Islam, avy ao amin'ny Hisham Mubarak Law Center, izay miteny momba ny fepetra fitazonana olona ao Ejipta. Fitaovana fandraketana lahatsary tsotsotra ihany no nanatontosàna ilay lahatsary, ary tsy mahay na inona na inona momba ny fikirakiràna sary izahay. Araka izany, aza dia ny haratsin'ny kalitao loatra no ifantohana, na ny olan'ny feo sy ireo olana teknika hafa. Omeko ihany koa ireo rohy mankany amin'ireo lahatsoratra hafa momba an'i Abdulmonem » hoy izy manoratra
Iza i Abdulmonem Jamaluddin?
· اعتقل عقب اغتيال السادات في 1981
Toy izao no amehezan'i Abdulfattah ny làlana nodiaviny :
“· nosamborina taorian'ny famonoana an'i Sadate, tamin'ny 1981
· notànana tsy nisy porofo nandritry ny telo taona tany amin'ny fonjan'i Turrah, sy Abus Za’abal, ary Al Wadi Al Jaheed, avy eo navotsotra
· nosamborina fanindroany indray tamin'ny 1993
· nafahan'ny fitsaràna miaramila, saingy mbola voatàna am-ponja foana.
· nampangaina ho isan’ « ireo niverina avy any Albania » (na dia tany am-ponja aza izy hatramin'ny 1993), nafahana indray, saingy mbola voatàna am-ponja foana.
· nanambady talohan'ny nisamborana azy fanindroany ary niteraka zazalahy kely 13 tona izay tsy mbola hitan'ny masony velively.
· antitra tsy fidiny noho ny fitànana azy am-ponja, manana olana ara-pahasalamàna izy any amin'ny aty, ny voa ary tratry ny hernie discale.”